पाँच खुट्टा भएको गाई जन्मिएपछि अशुभ भन्दै गाउँलेले घर गोठ नै बहिस्कार गरे ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारपाँच खुट्टा भएको गाई जन्मिएपछि अशुभ भन्दै गाउँलेले घर गोठ नै बहिस्कार गरे !
November 24, 2020 admin समाचार 3535
काठमाडौं । गाईका खुट्टा सामान्ययाः चार वटा मात्रै हुन्छन् । तर हालै चीनमा एक पाँच खुट्टा भएको गाई फेला परेको छ । गाउँमा यस्तो गाई जन्मेपछि चिनियाँ गाउँका बासिन्दाहरूलाई चकित भएका छन् । असाधारण भिडियो फुटेजमा ‘मौन्ट’ गाईलाई देख्न सकिन्छ ।
यो गाई अहिले नभई आठ महिना पहिले जन्मेको थियो । चीनको शानक्सी प्रान्तका एक किसानको घरमा यो गाई रहेको छ । गाईको पछाडि अतिरिक्त खुट्टा रहेको छ । गाईको मालिक, झाओले बताए कि उत्परिवर्तनशील जनावरको जन्मलाई उनीहरु अशुभ ठान्थे, पछि उनी दुःखी पनि भएका थिए ।यो खबर मंगलबार शानक्सी टिभी स्टेशनको एक कार्यक्रम, शानक्सी अर्बन एक्सप्रेस द्वारा रिपोर्ट गरिएको हो । रिपोर्टमा जब यो स्यानयुआनको काउन्टीमा जन्मिएको थियो तब यसको तौल १० किलोग्राम थियो । मालिक झाओको सावधानीपूर्वक हेरचाहले गर्दा अहिले यसको तौल १०० किलोग्राम पुगेको छ ।
गाई मालिक झाओले पत्रकारलाई भने, ‘गाईको पाँचौं खुट्टा अन्य अङ्गसँगै बढेको छ र छुँदा पनि यताउता सर्न सक्दछ ।’ उनले यस्तो गाई जन्मेपछि आफु चिन्तित भएको बताएका छन् । उनका धेरै छिमेकीहरूले उनको गाईको बारेमा सुनेर अशुभ हुने बताएका थिए । उनीहरुले अशुभ हुन्छ भनेर उनको घर र गोठ नै बहिस्कार गरे ।त्यो देखेर उनी एकदमै चिन्तित थिए । स्थानीय पशुपालन विशेषज्ञ लियू बेइजानले गाउँलेलाई नडराउन आग्रह गरेका छन् । उनले गाईलाई पोल्मिलिया नामको रोग रहेको बताएका छन् । पोल्मिलिया, अर्को शब्दमा, अतिरिक्त अंगहरू अर्थात एक अत्यन्त असामान्य डिसअर्डर हो ।
सन् २००२ को एक अध्ययनले अनुमान लगाएको छ कि संसारभरि जन्मने प्रत्येक १००,००० गाईवस्तुमध्ये चार भन्दा थोरैलाई अतिरिक्त अङ्ग हुने समस्या हुन्छ । यो कुरा थाहा भएपछि अहिले गाउँलेको सोचमा परिवर्तन आएको छ । उनीहरुले गाई धनीलाई चिमेकी स्वीकार गरेका छन् ।
१०० वर्ष नाघेकी मंगली थामीको अचम्म लाग्दो जिवन शैलि, अहिलेको युगमा पनि यसरी बाँचेका छन मान्छे !
February 9, 2021 admin समाचार 296
बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! मात्र ॐ लेख्नुहोस् !अनी सेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ !जन्म दिन कसरि मनाउने
February 5, 2021 admin समाचार 1087
December 7, 2020 admin समाचार 1553